Xinhua Myanmar - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် Sinovac ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အရေးပေါ်သုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် Sinovac ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အရေးပေါ်သုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ် ဆူရာဘာယာမြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ဇီဝဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinovac Biotech မှ ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပါဝင်သော သေတ္တာကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Asia
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် စတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ BPOM က Sinovac ကုမ္ပဏီ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အရေးပေါ်သုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
က Padjadjaran တက္ကသိုလ်တွင် အဆင့် ၃ စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် တရုတ်ဇီဝဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinovac Biotech က ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ ဘေးကင်းသော စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း BPOM အကြီးအကဲ Penny Lukito က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘေးကင်းသော အချက်အလက်များအရ ၎င်းရလဒ်များသည် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘရာဇီးနှင့် တူရကီ စသည့်နိုင်ငံများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အနည်းငယ်မှ အလယ်အလတ်အထိ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ရပ်သာရှိခဲ့ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ဘေးကင်းစိတ်ချမှုရှိသော လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအဆင့် ၃ မှ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
Sinovac ကုမ္ပဏီမှ ဆေးအလုံးပေါင်း ၁၅ သန်းစာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Budi Gunadi Sadikin က ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်က ပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းအထိ COVID-19 ကူးစက်ခံရကြောင်း အတည်ပြုလူနာဦးရေ ၈၀၀,၀၀၀ ရှိပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါ ကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း လူပေါင်း၂၄,၀၀၀ ကျော် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆိုအရ သိရသည်။ (Xinhua)
The COVID-19 vaccine produced by the Chinese biopharmaceutical company Sinovac Biotech met the safety standards set by the World Health Organization.
JAKARTA, Jan. 12 (Xinhua) -- Indonesia's food and drug authority BPOM on Monday issued the emergency use authorization for Sinovac's COVID-19 vaccine as the country will begin administering doses of COVID-19 vaccine on Wednesday.
As of Monday afternoon, there have been more than 800,000 confirmed cases of COVID-19 reported in Indonesia. The coronavirus epidemic has claimed more than 24,000 lives across the archipelago, according to the Health Ministry.■
Previous Article ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု ပြီးဆုံးသွားသဖြင့် စာသင်ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
Next Article ပျက်ကျသွားသည့် လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါသွားသူများ၏ ရုပ်လောင်းအချို့ကို အင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ဆယ်ယူ